सुत्केरी आमा र बच्चाको पेटमा १३ दिनदेखि पानी समेत नपरेपछि रुदै मिडियामा ! अन्तिम अबस्थामा एलिजा पुगिन – भिडियो हेर्नुहोस – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/सुत्केरी आमा र बच्चाको पेटमा १३ दिनदेखि पानी समेत नपरेपछि रुदै मिडियामा ! अन्तिम अबस्थामा एलिजा पुगिन – भिडियो हेर्नुहोस
भिडियो तलको समाचारको अन्त्यमा राखिएको छ,पुरा हेर्नुहोला । काठमाडौँ, १२ भदौ । जनकपुरदेखि जयनगर सम्म सञ्चालनका लागि भारतसँग खरिद गरिएको दुईवटा रेल यही भदौभित्र नेपाल आउँदैछ । नेपाल र भारतबीच जीटूजी प्रक्रियाबाट रेल खरिद गरिएको हो ।
नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले भदौभित्र रेल नेपाल आइपुग्ने जानकारी दिनुभयो । “को रोना म हामारीको स ङ्क्रमण सामान्य नभएसम्म रेल सञ्चालनमा भने आउने छैनन् तर भदौभित्रै रेल नेपाल आइपुुग्ने छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
अहिले भारतको विहारस्थित हाजिपुर स्टेसनमा राखिएको रेल को रोना भा इरस स ङ्क्रमणका कारण उत्पन्न अ वरोधले नेपाल आउन केही ढिलाइ भएको हो । रेल नेपाल र भारतबीच ‘क्रस बोर्डर’ चलाउनुपर्ने भएकाले दुवै मुलुकमा अहिले को रोना म हामारीको स ङ्क्रमण दर उच्च रहेको हुँदा तत्काल सञ्चालनमा आउन नसक्ने महाप्रबन्धक भट्टराईले स्पष्ट पार्नुभयो ।
यसैबीच भारतीय प्राविधिक र आर्थिक सहयोगमा निर्माण भएको जनकपुर–जयनगर रेल्वे लिक भारतले नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार सके भदौभित्र नत्र असोजभित्र भारतले नेपाललाई सो ट्र्याक हस्तान्तरण गर्नेछ ।
दुुई वर्षअघि २०७५ पुस २९ गते सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई दुईवटा रेल खरिदका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि रेल विभागले जीटूजी प्रक्रियाबाट भारतको कोकन रेल्वे कर्पोरेसनसँग ८४ करोड ६५ लाख रुपियाँमा दुईवटा रेल किन्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । सो रकममध्ये २० प्रतिशत भुक्तानी भइसकेको छ भने बाँकी भुक्तानी रेलको परीक्षणपछि मात्र गरिने रेल्वे कम्पनीले जनाएको छ । याे खबर गाेरखापत्र दैनिकमा छ।